अधुरै रह्यो कुलमान घिसिङको एउटा सपना …. ( भिडियो हेर्नुहोस् ) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/अधुरै रह्यो कुलमान घिसिङको एउटा सपना …. ( भिडियो हेर्नुहोस् )
काठमाडौं / नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल अर्को महिना सकिँदैछ । २०७३ सालको भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल भदौ २९ गते सकिँदैछ ।
भिडियो हेेरौ :
कृष्ण बहादुर बोहराको ८८ बर्षीय आमा मिडियामा, आऊछु भ`न्थ्यो यस्तो गर्दी`ए- भिडियो हेर्नुहोस !
४ हजारको नि’हुमा घरबेटिले गरे ह’त्या, दाउरो प्र’हार गर्दै देखेका प्रत्यक्ष दर्शी मिडियामा(भिडियो)